Sabotsy 26 Septambra 2020. – FJKM
Mpanorina fa tsy mpandrava ny Tompontsika
Ny hoe : « omeko fo iray izy » dia midika fa ny Tompo mihitsy no miasa ao amin’ny tsirairay mba hananan’izy ireo firaisankina sy fiombonana . Mitovy ny tanjona , miara-paly miaraka ory , miara-manompo Tompo iray , araka ny vavak’i Jesoa hoe : « mba ho iray ihany izy » (Jao 17.14).Miara-mientana amin’ny fanompoana masina .
Homeko lalàna iray izy mba hatahorany Ahy lalandava (and 39) . Manana vina sy sori-dàlana mazava ho an’ny olona ny Tompo . Amin’ny alalan’i Jesoa Kristy, Ilay lalàna sy fahamarinanna ary fiainana dia mitantana antsika hizotra amin’ny fiainana mandrakizay ny Tompo . Sitrany raha miaina amin’ny fahatahorana Azy isika amin’ny andavanandrontsika mihitsy.
3-Mpanorina toe-po mba hatahorana Azy
« Ary ny fahatahorana Ahy dia hataoko ao am-pony kosa mba tsy hialany Amiko » (and 40) . Ambaran’ny Tompo eto izay hataony sy ny anton’izany .Izy no mahalala izay mahasoa antsika .Isan’izany ny handraisantsika fitahiana sy fahavokarana (and41) . Miara-dàlana amin’izany dia mamolavola toe-po sy toe-tsaina mba hifikirantsika Aminy hatrany ny Tompontsika . Tsy mijanona amintsika irery izany fa mitohy amin’ny taranaka fara mandimby .
Inona avy ireo dingana tanterahan’ny Tompo amintsika mariky ny fitiavany antsika ?
Sampana Sampana Sekoly Alahady FOIBE FJKM